एकांकी ०७ - पीडा एक : भाका अनेक | मझेरी डट कम
editor — Sun, 04/06/2014 - 11:52
अधबैँसे आइमाई : एइ सडक ! खबरदार ! प्रत्येक शब्द तौलिएर बोल् । तँ यस समयको साँचो इतिहास होस् । तेरा छातीमा अनगिन्ती पीडाहरू सलबलाइरहेका छन् । तेरा अङ्गप्रत्यङ्गमा थुप्रै उपलब्धिहरू नाचिरहेका छन् । तँ सज्जन र दुर्जनको कुरा गर्छस् । मैले तेरै छातीमा टेकेर मान्छेको मलमुत्र खानुपरेको छ । म बोक्सी हुँ रे ! मसँग अलौकिक शक्ति छ रे । म ....... म कलिला नानीहरूको मुटुकलेजो खान्छु रे । म लैना गाईभैँसीको दूध चुस्छु रे । (अट्टहासका साथ हाँस्दै) एइ सडक ! यस सडकमा उभिएर मेरो विगत सुनिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू ! मसँग यस्ता तागत पनि छन् अरे । मलाई मन नपरेको मान्छेलाई क्षणभरमै बिरामी तुल्याउन सक्छु रे । हो, म कहिले कालो बिरालो बनेर सुतेका मान्छेको खुन चुस्न सक्छु रे । हो–हो, तपाईंहरू पत्याउनुहुन्छ ? यदि पत्याउनुहुन्छ भने मेरो घोषणा पनि सुनिदिनुस् । म आज यसै सडकबाट घोषणा गर्छु : मलाई मन नपर्ने मान्छेका विरुद्ध मेरो अलौकिक शक्ति लगाउँछु । सबैलाई यही सडकमा नाङ्गेझार पार्छु ।
युवती : (केही गम्भीर भएर) म मरनीदेवी र वसन्तदेवी त भइनँ तर उस्तै पीडाको घाउ बोकिरहेकी छु । मनभित्र पीडा लुकाएर फुस्रो हाँसोको टेकुवामा मेरो संसार थेगिएको छ । म अक्षरश: सत्य बक्दै छु । धमिलो मेरो विगत अबका छोरीबुहारीले खप्न नपरोस् । म कसैकी बुहारी र कसैकी पत्नी बन्न आइपुग्दा ठूलो धर्मसङ्कटमा थिएँ । मनका धनी मेरा बाबुआमाले मेरा श्रीमान् र सासूससुरालाई धनले खुसी पार्न सक्नु भएन । दाइजो नल्याएको निहुँमा मैले अनगिन्ती शारीरिक र मानसिक पीडा खप्नुपर्यो । (गहभरि आँसु पार्दै) एकदिनको कुरा हो, दाइजो नपुगेकै बहानामा श्रीमान्ले मेरो शरीरमा मटितेल खन्याएर सलाई कोर्न थालेँ । म फुत्किएँ । अँझै फुत्किरहेकी छु । म कहाँ छु न श्रीमान्लाई थाहा छ न आमाबुबालाई । आज दाजुसँग भेट्....... (गला अवरुद्ध हुन्छ । उनी ओझल पर्छिन् ।)
उसले भाषणमा ठुला कुरा गर्यो
सक्छौ भने चितासँगै
कालो दिन अर्थात् बैशाख बाह्रलाई सम्झिएर